'ILa Casa de Papel 5' - Impumelelo yeNetflix efinyelela esiphethweni | Bezzia
'ILa Casa de Papel 5': Impumelelo yeNetflix
USusana godoy | 07/09/2021 14:00 | Izindaba
Isitolimende esisha se- 'IPhepha Lendlu 5'. Isizini entsha ehlukaniswe kabili. Lokhu kwenzeka kaningi lapho uchungechunge lufinyelela kumphumela walo wokugcina njengoba kubonakala kunjalo. Kepha okwamanje, iNetflix isiphinde yaba yipulatifomu yokuzikhethela ngenxa yempumelelo yochungechunge olunje.
Yize njengoba sazi kahle, ibingazalelwanga kuwo kepha sayibona okokuqala ku-Antena 3. Kodwa kuyiqiniso ukuthi ukweqa endaweni yesikhulumi kwenza izigidi zabantu zikwazi ukuyizama ngaleyo ndlela zibe into ngaphakathi nangaphandle kwemingcele yethu okuyikho ngempela. Usuzibonile izahluko ezi-5 zokuqala?
1 'ILa Casa de Papel 5' ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili
2 Isizini entsha yeLa Casa de Papel
3 Ngabe lizoba khona ikusasa leLa Casa de Papel?
'ILa Casa de Papel 5' ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili
Uhambo lube lude, ngokuhlanganyela okuningi nokuvaleliswa okubuhlungu ngezikhathi ezithile, njengoba kuhlala kunjalo. Kodwa sifike kwisizini yesihlanu yochungechunge ebibukeka inoyedwa kuphela. Njengoba sishilo, abalingiswa bayo ababhincile amajazi abomvu nomaskhi kaDalí sebephenduke abalingiswa abakhulu ngaphakathi nangaphandle kwezwe lethu. Kepha kuyiqiniso ukuthi yonke indaba enhle nayo kufanele iphele njengoba sazi kahle. Yize kusizwisa ubuhlungu, kodwa kuyiqiniso ukuthi bafanelwe ukuphela ngesitayela. Ngakho-ke NgoSepthemba 3, iziqephu zokuqala ezinhlanu zesizini 5 zakhishwa kanti ezinye ezi-5 zizofika kuNetflix ngoDisemba 5. Yebo, kulo nyaka lolu chungechunge luzonqanyulwa.
Isizini entsha yeLa Casa de Papel
Ngeke futhi senze abaphangi ngoba lapho-ke sesivele sazi ukuthi kwenzekani, ngakho-ke sizothi kuphela ngemuva kwesiqephu sokugcina sesizini yesine, besidinga owesihlanu ngokushesha okukhulu. Kuyiqiniso ukuthi ngaleso sikhathi kwakukhona imibono eminingi yokuthi owesine uzoba ukuphela. Kepha Lokho kushiya amafreyimu amaningi emoyeni mhlawumbe kusinikeze inkomba yokuthi owesihlanu uzofika futhi wafika.
Kepha kufika ezinhlosweni ezimbili futhi kubonakala sengathi u-Plex Pina ubefuna ukunikela ngokuthile okungaphezulu obekungalindelwe yizethameli. Ngoba noma ngabe ihlukaniswe ngamaqoqo amabili, kuliqiniso ukuthi iziza ezicishe zingaxazululwa cishe zizokwenziwa engxenyeni yokuqala. Ngaphezu kwalokho, lapho kukhishwa izahluko eziyi-10 ngasikhathi sinye, umphakathi usuyazi noma ucacile ukuthi yikuphi okungaziwa okuzoqala ukuxazululwa. Kuyaziwa ukuthi ingxenye yesibili ye-'La Casa de Papel 5 'ibhekela kakhulu isimo sezemizwa somlingiswa ngamunye futhi ngaleyo ndlela ingaxhunyaniswa ngqo nokuvaleliswa.
Ngabe lizoba khona ikusasa leLa Casa de Papel?
Ngalesi sikhathi, bonke labo abalandeli abangafuni ukuthi uchungechunge luphele, baqala ukubheka izinketho ezintsha. Kuke kwaba nenkulumo yokuthi mhlawumbe omunye umlingisi uzothatha izintambo futhi kungahle kube nochungechunge olusha olususelwe kulo noma mhlawumbe, ngemuva kweminyaka, lubuyele endaweni yokuqala njengoba kwenzekile nangezinye izihloko eziningi esesivele sizazi. Okwamanje, kufanele sixazulule iziqephu eziyi-10, njengoba sithi zihlukaniswe izingxenye ezimbili.
Le sizini ibe nokurekhoda okuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, ngenxa yenkinga yeCoronavirus futhi, ngoba isahluko ngasinye sinehora elilodwa ubude, okusho ukuthi sandisiwe kancane. Phakathi kwezimo zayo sineDenmark, kanye neSpain kanye nePortugal. Ngenye yezinkathi ezijabulisa kakhulu ngazo zonke izindlela. Ngoba kumayelana nokubeka iqembu ngisho noProfessor cishe, cishe kuze kube semkhawulweni. Ngaphezu kokubheja izinhlamvu ezintsha nokuvalwa okuhlose ukuba ngukuqedela. Impela bazokwenza!
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Izindaba » 'ILa Casa de Papel 5': Impumelelo yeNetflix
Ungayithola kanjani imisipha kepha ngaphandle kwesidingo sezisindo
Umehluko phakathi kwedethi yokuphela kwesikhathi nokuhamba phambili ngaphambi kosuku